Tehirizo ny famoahana gazety amin'ny paikadin'ny varotra 2009 | Martech Zone
Tehirizo ny famoahana gazety amin'ny paikadim-barotra tamin'ny 2009
Alakamisy Janoary 29, 2009 Douglas Karr
Ny namana tsara Lorraine Ball, izay mihazakazaka Masoivohon'ny marketing any Indianapolis antsoina hoe Roundpeg, niara-niasa tamiko nandritra ny taona lasa tamin'ny mpivady roa. Ny iray amin'ireo lesona nianarako tamin'i Lorraine dia ny tsy fahombiazan'ny fanambarana an-gazety. Mahagaga ny isan'ny havoakanao mamoaka indray ny famoahana - sy ny isan'ny miditra amin'ny bilaogy amin'ny farany. Izy io dia mety ho goavana amin'ny fisintomana rindranasa, fahefana ary famoahana ny teny ao amin'ny orinasanao.
Ny tena manamarika indrindra dia ny hoe tsy mila miandry ny hetsika lehibe hitranga ao amin'ny orinasanao ianao hamoahana fanambarana an-gazety. Zavatra tsotra toy ny fanambarana webinar na tranga fandalinana tranga vaovao dia fitaovana lehibe! Aza mihena ny famoahana gazety amin'ny paikadin'ny Marketing 2009. Misaotra an'i Scott Whitlock ao Flexware Innovation, orinasa teknolojia famokarana. Nandatsaka taratasy kely tamiko i Scott nanontany momba ireo toeram-pivarotana PR natolotro teo aloha ary hitako fa hitondra lahatsoratra bilaogy tsara izany.
Ireto fivarotana ireto dia PRWeb ary PRLeap raha mpivarotra ho azy ianao. Ny fanontana gazety dia famoahana zava-kanto kely raha toa ka tena tianao ny hahazo tongotra ry zareo. Antsoy i Lorraine raha mila fanampiana ianao any!
Tags: coca Colany fihenan'ny fiovame-antsinjaranyKern
Marketing amin'ny tanjona, fa tsy eyeballs
Ahoana ny fisafidianana mpamorona tranonkala
1 Feb 2009 tamin'ny 11:59 maraina
Misaotra tamin'ny rohy sy ny naoty Doug. Hampitombo ny fampiasanay ny varotra an-tserasera izahay amin'ity taona ity. Ny fanampianao ahy manokana dia tsy mampino!
Febroary 14, 2009 amin'ny 3:40 PM
Misaotra tamin'ny rohy.. Ok, ahoana no tsy nahavery azy? Tsy maintsy ho natory teo amin'ny kodiarana. Vidéo tsara koa!